Al-shabaab oo wareer ku qaaday Saldhig ay Ciidamada DF ku leeyihiin Sh/hoose – XAMAR POST
Dagaalameyaal ka tirsan Ururka Al-shabaab ayaa caawa weeraray Saldhig Ciidanka Booliska Soomaliya gaar ahaan Haramcad ku leeyihiin degaanka Xaawa Cabdi ee Gobolka Shabeelada Hoose, sida ay KNN u xaqiijiyeen dadka degaanka.
Weerarka oo socday muddo ku dhow saacad ayaa saameen ku yeeshay xaafadihii ka agdhowaa halka uu dagaalka ka dhacay, waxayna dadka soo sheegayaan in ay maqleen dhawaaqa hub fudud iyo Bambooyinka gacanta laga tuuro.
Ilaa hadda lama xaqiijin maro khasaaraha ka dhashay weerarkaas, hase yeeshee markii 2-aad oo ay Al-shabaab weerar ka fuliyaan deegaankaasi muddo 24 saac gudaheed. Weerarkii ugu dambeeyay ayaa dhacay xalay xiligaan oo kale.
Rooble oo kulan la qaatay Danjire Fransisco Madiera